आज तपाईँ कार्कीको छोरो भएर यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई समाजले दिएको थर कार्की नभएर सार्की भैदिएको भए आफूमाथिको अपमान सुहाँउने थियो त?
ज्वाला संग्रौला फेसबुक स्टाटस : जस्ताको तस्तै
एउटा कुकुरको बच्चालाई भने च्याप्प चेपेर म्वाँई खाँदै जिउ मुसार्दै ओछ्यानमा सुताउने अनि आफूजस्तै मान्छेलाई चैं यस्ले छोए जातै गैहाल्छ कि पृथ्वी नै उभिण्डो परिहाल्छ कि जस्तो गरेर आगनको पल्लो छेउमा बसाएर छिछि दुरदुर गर्दै अलग्गै भात खुवाउने यो अन्धो नेपाली समाज र बकम्फुसे परम्पराको भेदभाव र दमनकारी मुकुण्डो च्यात्नु पर्छ कि पर्दैन सरकार? आख़िर कतिदिन मान्छे मान्छेबीच यसरी जातीय तगारो लगाएर रमिता हेरिबस्छस् ? जबाफ दे त!!
Milan Karki तपाई को कुरा नि ठिकै हो। तर के यो समाज लाई मात्र दोश लगाएर आफू पन्छिन मिन्छ र ज्वाला जि? के यी देश का लठुवा राजनिक्ज्ञ हरु ले हिजो के नै लछारपाटाे लगाएछन र ? जब कि श्री ५ महेन्द्र मौसुफ कै पाला मा, २०२० साल ताका नै हैन र मुलुकी ऐन पारित गरेको जातिय छुवाछूत विरुद्ध ? त्यस यता हाम्रा ग्वाच नेता जि हरु ले जनता को लागि के के गरे हामी ले खोज्नु पर्दैन र? यो छुवाछूत अन्त्य को लागि कुनै समुदाय र क्षेत्र लाई दोषी देख्दिन म चाहिँ। यस को मुल कारण त अशिक्षा र चेतना को कमि नै हो। हिजो हाम्रो हजुरबुबा, हजुरामा को पाला मा कुखुरा ले छोएको पानी चल्दैन थियो रे आज हाम्रो बुबा, आमा हरु को पाला मा कुखुरा नै चल्छ। अनि हाम्रो पालो मा छैन त छुवाछूत । यो कुनै जादु हैन छु मन्तर गरेर अन्त्य हुने। यसरी यसरी कुनै जाती विशेष लाई गाली गरेको पटक्कै सुहाएन।
Jwala Sangroula म कसरी कतिबेला र कहाँ पन्छिएँ आफू हजुर? हिजोको ईतिहाँसमा के थियो, कुन राजाले के गरे भन्ने बेला होईन यो, बर्तमान समाजलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो शिक्षित युवाहरुले। प्रकृतिले जन्मदैमा जात छुट्याएको होईन, समाजले आफ्नो स्वार्थ , कामको बाडफाँट र सजिलोको लागि त्यतिबेला मान्छेमान्छे बीच पर्खाल खडा गरेर तँ यो तँ त्यो भन्यो। हिजो लुगा सिलाउनेलाई दर्ज़ी भन्यो। आज लुगा सिलाउनेहरु बाहुन छैनन्? हो, जस्ले जे काम गर्दा नि फरक पर्दैन । त्यसैले जातपातका डोरी बाटेर एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई पशुभन्दा तल्लो स्तरमा राखेर बाँध्नु हुन्न। अब त्यसैले संबिधानमै छुवाछुत अन्त्य भनेर लेखिसकेपछि यस्लाई कडाईका साथ लागु गर् भनेर सरकार सँग जबाफ मागेको हो। यस्ता कुरागर्ने तपाई हामीलाई लछार्न कति हो कति लाम लाग्या छन्, तर परिवर्तन हुन केहि समय लाग्छ, अवश्य एकदिन मान्छे मान्छेबिचको दिवार भत्काईने छ। हाम्रा हरिलठ्टक टोप्रे नेताहरुलाई घिस्याएर ल्याउने हो सडकमा अब! अनि, यसरी तपाईले जातिबि़ेषेशलाई गाली गरेको सुहाएन भन्दै मलाई कटाक्ष गर्दैगर्दा एउटा मान्छेले पशुको थुतुनो चाटेर मान्छेलाई अछुत बनाएका दृष्यहरु, घटना परिघटनाहरु कतिको सुहाउँछन् होला? आज तपाईँ कार्कीको छोरो भएर यो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँलाई समाजले दिएको थर कार्की नभएर सार्की भैदिएको भए आफूमाथिको अपमान सुहाँउने थियो त? अलि फरक तरिकाले सोचौं त.,!
श्रीमतीलाई यौन सन्तुष्ट नभएर अर्कै युवक संग फरार भइन भन्दै श्रीमान आए, श्रीमतीका घिनलाग्दा हर्कतहरु सुनाए (भिडियो सहित)